San Htun's Diary: နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း ငါတို့စာသင်ကျောင်း
နာတို့ junior လေးတွေ။ joking. thanks for sharing. :D
ကောင်းတယ်...ကျောင်းအကြောင်း အတွေ့အကြုံလေးတွေ များများရေးစမ်းပါ...ပညာရေးကို စိတ်ကုန်ချင်နေတဲ့ ကလေးတွေ အားကျအောင် ပြန်ပြောပြချင်လို့...ဘယ်လိုကြိုစားလို့ ဘယ်လောက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းလဲ ရေးဖို့ request လုပ်ခဲ့ပါတယ်...
အပတ်စဉ် မြန်မာပဲ အမြဲ ရွှေတံဆိပ်ရပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ...တို့မြန်မာတွေဟာ လူဖျင်းလူညံ့၊ လူနုံလူအတွေ မဟုတ်မှန်း သိအောင် ဆက်ချပေတော့...